Horudhac: Levante vs Barcelona… (Kooxda Koeman oo doonaysa inay si ku meel gaar ah ula wareegto caawa hoggaanka horyaalka La Liga) – Gool FM
(Valencia) 11 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabto waddada guusha ee horyaalka La Liga, marka ay caawa u safrayaan garoonka Ciudad de Valencia, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan Naadiga Levante.
Sidoo kale Blaugrana ayaa doonaysa inay kulan guul gaaro si ay si ku meel gaar ah ugu qabato hoggaanka horyaalka La Ligaha Spain.
Kooxda Tababare Ronald Koeman ayaa kulankii ugu dambeeyey waxa ay barbaro goolal la’aan ah la dhaafi waayeen Ateltico Madrid Sabtidii, halka Levante ay kulankan soo geli doonto iyadoo ciyaarteedii ugu dambeysay ay barbaro 2-2 ah la soo gashay Alaves.
Garoonka: Ciudad de Valencia
Sergio Postigo ayaa qaba dhibaato yar oo dhanka canqowga ah, waxaana uu seegi karaa saddexda daafac dambe ee kooxda Tababare Paco Lopez.
Rober ayaa la filayaa inuu sii wato inuu daqiiqado uu ku ciyaaro ka helo khadka dhexe, halka Nemanja Radoja iyo Nikola Vukcevic aysan wali taam ahayn.
Goolhaye Dani Cardenas ayaa laga yaabaa inuu daqiiqado ku helo goolka oo uu shabaqa ku bilowdo ka hor Aitor Fernandez kulanka caawa.
Dhinaca kale Sergio Busquets ayaa shaki laga gelinayaa kulankan kooxda Barcelona, kaddib markii laga saaray garoonka kulankii Sabtidii ay barbaraha la galeen Naadiga Atletico Madrid.
Dhaawac wajiga ka gaaray awgii ayuu ku seegi karaa kulankan, laakiin haddii uu tababaraha Barcelona soo xusho ciyaarta caawa, Sergio Busquets waxaa waajib ku ah inuu soo xirto cinjirka wajiga jugta ka dhowra.
Yeelkeede, haddii uu xiddigan muhiimka ah maqnaado kulankan, tababare Ronald Koeman ayaa khadka dhexe ka wada ciyaarsiin doona saddex ciyaaryahan oo da’yar kuwaasoo kala ah; Frenkie De Jong, Pedri iyo Ilaix Moriba.
Ronald Araujo ayaa la filayaa inuu soo galo daafaca dhexe ka hor Oscar Mingueza kulanka caawa.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleysatay 11 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka La Liga ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Dhinaca kale Levante ayaa guuldarro la kulantay mid kasta oo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa gool dhalisay mid kasta oo ka mid ah 29-keedii kulan ee ay horyaalka La Liga ku wajahday Levante, waxaana ay wadar ahaan ka dhalisay 86 gool.
>- Levante ayaa guuldarro la kulantay lix ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga, waxaana ay haysataa kaliya 1 Guul iyo 1 Barbaro kaddib markii ay guuldarro la kulantay afar jeer 22-keedii kulan ee tartankan markaas ka hor, waxaana ay guuleysatay 7 jeer, halka ay barbaro gashay 11 kale.
>- Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool sagaal ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.